चालू आवको ५ महीना : मुद्रास्फीति बढ्यो, विप्रेषण आप्रवाह घट्यो | आर्थिक अभियान
चालू आवको ५ महीना : मुद्रास्फीति बढ्यो, विप्रेषण आप्रवाह घट्यो
चालू खाता ३०० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घाटामा
२०७८ पौष, २९
पुस २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन अनुसार मुलुकमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ। केन्द्रीय बैंकले बिहीवार जारी गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनबाट यस्तो देखिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार २०७८ को मंसिर महीनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा मुद्रास्फीति २ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो।
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा कुल वस्तु निर्यात १०५ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएर १०२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा यस्तो निर्यात ५ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।
समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ८३८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष भने सोही अवधिमा यस्तो आयात ९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो। मंसिरसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ५४ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेर ७३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो घाटा १० दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको थियो। समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १२ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा चालू खाता ३०० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोहि अवधिमा चालू खाता २३ अर्ब रुपैयाँले बचतमा घाटा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा १९ करोड ६६ लाखले घाटामा रहेको चालू खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १९५ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १०६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो।
समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको थियो।
अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भने विप्रेषण आप्रवाह ६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको थियो।
उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा हट्यो जोरबिजोर प्रणाली [२०७८ माघ, १४]
अवकाश सुविधामा ५ % मात्रै कर : सर्वोच्च अदालत [२०७८ माघ, १४]
जुन सरकारले बढी बजेट खर्च गर्न सक्छ उसैलाई धेरै बजेट दिन्छौं : अर्थमन्त्री शर्मा [२०७८ माघ, १४]
उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातमा हट्यो जोरबिजोर प्रणाली
अवकाश सुविधामा ५ % मात्रै कर : सर्वोच्च अदालत
जुन सरकारले बढी बजेट खर्च गर्न सक्छ उसैलाई धेरै बजेट दिन्छौं : अर्थमन्त्री शर्मा
तीन ओटा कम्पनीको साधारण सभा स्थगित, कारण के त ?
मल्टीपर्पस फाइनान्सले कमायो रू. ४६ लाख २७ हजार नाफा
असोज र कात्तिकमा पारित बोनस शेयर अधिकांशले सूचिकरण गराए, यी तीन कम्पनी मात्रै बाँकी
२१ बैंकको खराब कर्जा घट्यो